Bosnia Sy Herzegovina: Tsingerintaonan’i Srebrenica · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Aogositra 2017 10:30 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, বাংলা, عربي, Italiano, 繁體中文, 简体中文, English
Nankalaza ny faha-13 taonan'ny fandripahan'olona tao Srebrenica i Bosnia sy Herzegovina omaly 11 Jolay izay nofaritan'ny Fitsarana iraisampirenena tao La Haye tamin'ny taon-dasa ho famongorana mamely ny mponina Miozolomana tao amin'ny faritra.
(Do not avy amin'i Kitestramrt, nampiasàna Lisansa Creative Commons)
Araka ny tatitra nataon'ny bilaogy Bosnia News, nalevina nandritra ny lanonana natao tao amin'ny Foibe Potočari Memorial akaikin'i Srebrenica ny sisapaty tamin'ireo niharan'ny fandripahana miisa 307 vao fantatra, teo akaikin'ny toerana nisy an'ireo lasibatra hafa mihoatra ny 3.000 izay efa nalevina teo amin'ny toerana:
Nalevina tao amin'ny fasana faobe ny sisapaty tamin'ireo niharam-boina tamin'ny fandripahana miisa 307, teo anelanelan'ny 15 ka hatramin'ny 84 taona, taorian'ny fiafaran'ny herisetran'ny Serba tamin'ny taona 1992-1995 tamin'i Bosnia ary nofantarina tamin'ny alàlan'ny fitiliana ADN.
Taorian'ny fitarihana fisaonana nandritra ny vavaka, niantso ny Parlemanta Eoropeana ny lehiben'ny Vondrom-piarahamonina Islamika Bosniaka Reisu-l-ulema, Mustafa Ef. Ceric mba hilaza ny daty 11 jolay ho andro fisaonana manerana ny kaontinanta.
Nanoratra momba ity andro ity tao amin'ny bilaoginy i YakimaGulagLiteraryGazett :
Niseho fahitalavitra imbetsaka i Hasan Nuhanović. Ilay mpifanolo-bodirindrina amiko izay mipetraka eo akaiky eo ary miara-mandeha fiara fitaterana tsy tapaka amiko. Namoy ny zanany lahy sy ny vadiny izy tamin'ny fandripahana, Nermin no anaran-janany lahy. Fantatro fa tsy vahiny tamiko ny tarehin'ilay ramatoa. Naseho tao amin'ny ‘Cry from the Grave’ (Mitomany teo amin'ny Fasana) izy sy tamin'ny fanadihadiana hafa naseho omaly ihany koa.
Andron'ny Fisaonana ofisialy androany ho an'ireo niharam-boina tamin'ny famonoana.
Vondrona Facebook maro no natokana ho fahatsiarovana ny fandripahana tao Srebrenica, toy ny Learn from History: Remember the Bosnian Genocide (Fianarana ny tantara: Fahatsiarovana ny Fandripahana Bosniaka ) izay manana mpikambana maherin'ny 6.600 , na Never Forget Srebrenica 11.07.1995 (Aza hadinoina mihitsy ny Srebrenica 11.07.1995) izay manana mpikambana maherin'ny 4.200. Nisy mihitsy aza ny fahatsiarovana antserasera omaly izay nokarakaraina tao amin'ny vohikalan'ny tambajotra ara-tsosialy.
A cry from the grave (tomany teo amin'ny fasana) (jereo ny Fizarana 1 ato) no vondrona Facebook voalohany nifandray tamin'ny fizarana rehetra miisa 11 tamin'ny fanadihadiana malaza nataon'ny BBC tamin'ny taona 1999 . Manolotra ny tohin'ny horonantsary antsoina Never Again ny bilaogy Bosna Muslim – Media sy ny rohin'ny lahatsary hijerena azy;
Ity sarimihetsika faharoa ity dia natao ho fanandramana ny fitsarana ny zava-nitranga nanomboka tamin'ny famonoana. Moa ve nisy ny onitra nomena ireo namoy ny fianakaviany? Azo atao ve ny mitondra ireo mpanao heloka bevava any amin'ny fitsarana? Moa ve izao tontolo izao mahatsiaro ny zava-nitranga nahatsiravina indrindra natao tany Eoropa hatramin'ny taona 1945?
Iray volana lasa izay, nametraka fitoriana sivily manohitra an'i Holandy sy ny Firenena Mikambana ny fikambanan'ny Reny ao Srebrenica, izay ahitana ny havan'ireo niharam-boina miisa 6.000 noho ny tsy fahombiazana tamin'ny fanakanana ny tafika Serba Bosniana tamin'ny famonoana ny Bosniaka miisa 8.000. Nilaza ny fitsarana Holandey ny andro mialoha ny tsingerintaonan'ny famonoana Srebrenica fa tsy mahefa izy ireo mikasika ny raharaha satria voaaron'ny sata tsy azo tsaraina ny Firenena Mikambana na dia voalazan'i Eric Gordy tao amin'ny East Ethnia aza hoe, ” tsy voaaro na tamin'inona na tamin'inona akory ireo olona ananan'ny Firenena Mikambana adidy tsy maintsy arovana”. Na izany aza, hanomboka amin'ny volana Septambra ny fitsarana ny governemanta Holandey .
Nanontany tena ny bilaogy Samaha raha niresaka momba ny didim-pitsarana:
Raha toa ka tsy azo ho tànana ho tompon'andraikitra noho ny tsy fahombiazana tamin'ny fanajana ny fifanarahany manokana ny fikambanana toy ny Firenena Mikambana dia inona no ahazoantsika antoka fa tena hampihatra izany tokoa izy ireo? Raha afaka mampiasa ny sata tsy azo tsaraina an'ny Firenena Mikambana ireo firenena mpikambana ao aminy, inona no fiantohana fa tsy momba na iza na iza ny tafika ao anaty fifandirana? Inona no hanakana ny fandripaham-bahoaka iray hafa raha misy ny ohatra napetraka fa sady tsy antenaina no tsy manam-pikasana ny hanatanteraka ny iraka nampanaovina azy ireo ny Firenena Mikambana?